mubvunzo CLS DC-10-30F repaint
1 gore 8 ago #431 by Gh0stRider203
Munhu nemasanga achida kuita repaint Akandikodzera, nokuti CLS DC-10? Ndicho nyore chaizvo repaint asi Handitombozivi sokuti messing naro, nokutendeseka. Handisati akaisa vapfurwa sei chinofanira kutarisa, uyewo chifananidzo pamwe 2 decals pairi.
Ini Dai munhu ari wiling kuita izvi tinokoshesa kwazvo
ari painkit inowanika pano: www.commerciallevel.com/misc/DC10/DC10_paintkit.zip
Mazvita wakagamuchira: 45
1 gore 8 ago #432 by Dariussssss
Ndaita zvichida 100 repaints nokuda FlightGear ndege sim, asi FSX repaints vari kunze sungano yangu. Chaizvoizvo anotarira zvakanaka.
1 gore 8 ago #436 by Colonelwing
Chokwadi munhu anokwanisa kuita basa ,,, kondirakiti huru ndinoti!
1 gore 8 ago #437 by Gh0stRider203
Zvandakaverenga vaiswa aingova zvizere muviri mumwe, inova chimedu keke ... asi pane zvakawanda nawo kupfuura izvozvo.
The FULL muviri mumwe une zvose akaturikidzana siyana ari PSD (rinova CHETE PSD vari Kit).
zvanzi forodha sokunge paunenge unzip naro ... elnaz prnt.sc/ej7rar
Handina kushivirira kuzodzosera kuita fuselage zvidimbu elnaz
Time chokusika peji: 1.929 mumasekonzi